James Swan oo xasuusiyay Farmaajo kaalinta looga baahan yahay | KEYDMEDIA ONLINE
James Swan oo xasuusiyay Farmaajo kaalinta looga baahan yahay
Wakiilka Ergayga gaarka ah ee QM u qaabilsan Soomaaliya James Swan ayaa Madaxweynaha JFS Maxamed Farmaajo ugu baaqay inuu qaato doorkiisa isu keenidda dhinacyada kasoo hor jeeda ee siyaasadda dalka maadaama uu yahay Madaxweyne.
MUQDISHO, Soomaaliya - Wakiilka Ergayga gaarka ah ee QM u qaabilsan Soomaaliya James Swan oo la hadlay BBC -da ayaa si aada waxa uu ugu nuux-nuuxsaday arrimaha la xiriira doorashooyinka ee muranka xooggani ka taagan yahay.
James Swan ayaa tilmaamay in ay muhiim tahay in la isku soo dhawaado si xal loo gaaro, waxa uuna carrabka ku adkeeyay in madaxweyne Farmaajo uu yahay madaxweynihii dalka, waxa uuna sheegay in looga baahan yahay inuu isku keeno dhammaan dadka isaga ka aragtida duwan ee ay isku hayaan arrimaha doorashooyika.
Ergaygu wuxuu sheegay in ay muhiim tahay in lasameeyo Tanaasul si ay u dhacdo doorasho Xor iyo Xalaal ah taasoo wada Ogol lagu yahay, si nabad gelyada dalka aan mugdi loo galin.
Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa gaaray go'aan ah in doorasho la aado, iyadoo ay maqan yihiin laba kamida maamul goboleedyada dalka kuwaasoo kala ah Puntland iyo Jubbaland, sidoo kalena ay meel cad ka taagan yihiin musharaxiintii kula tartami lahayd kursiga madaxtinimada Soomaaliya madaxweynaha hadda talada haya ee Maxamed Farmaajo.
"Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxaan ugu baaqayaa inuu qaato hoggaankii looga baahnaa oo uu isu keeno dhinacyada kala duwan ee isku mari la’ doorashada, si horay loogu socdo" ayuu yiri Mr.Swan.
Madaxweyne Farmaajo doorka uu leeyahay wuu garanayaa balse xukun jaceyl dartii ayuu indhaha isaga tirayaa, waxaana u muuqata inuu boobo kursiga sidii uu ugu boobay kuraasta madaxweyne yaasha Koofur Galbeed, Galmudug iyo Hirshabeelle.